Masalaha lagu oogi doono Salaada Ciidul adxada Boosaaso oo la iclaamiyay. – SBC
Masalaha lagu oogi doono Salaada Ciidul adxada Boosaaso oo la iclaamiyay.
Posted by Webmaster on November 5, 2011 Comments
Maamulka Degmada Boosaaso iyo Culimaa udiinka ku dhaqan magaaladan Boosaaso ayaa kulan saxaafadeed ay si wada jir ah ugu qabteen xarunta dowlada hoose ee Boosaaso waxay ku iclaamiyeen Maalin nimada Berito ah in ay tahay Maalinta ciidul adxaa.
Sidoo kale Waxay halkaasi ku sheegeen in Masalaha lagu tukan doono salaada Ciidul adxada ay, islamarkaana ay isugu soo bixi doonaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso uu noqon doono Cirifka bari ee Magaalada Boosaaso Gaar ahaan banaanka u dhow Xarunta Madaxtooyada Boosaaso.
Duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdala Xasan oo halkaasi kula hadlay Saxaafada ayaa ugu horeyn shacabweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Boosaaso ugu Hambalyeeyay Fadliga Maalinta Ciidka Allena uga Baryay in ciidan ciideeda kale ay ku gaaraan Nabad iyo horumar.
Sh Cismaan Maxamed Faahiye oo ka mid ah Culimada Gobolka Bari ayaa dhankiisa kula dardaarmay Shacabka Muslimiinta ah in ay iska ilaaliyaan waxyaabaha Fasahaadka ku keeni kara Fadliga Maalinta Ciidul Adxaa, sidoo kalena xusuusiyay shacab in gowraxa xoolaha nool ee Udxiyada haboontahay in la gowraco xiliga salaada Ciidka laga soo baxo.
Ugu dambeyntii waxaa ay Iclaamintani ku soo aadeysaa xili shacabka Boosaaso ay siweyn ugu diyaar garoobeen bilashada Maalinta Ciidul adxaa oo ku beegan Maalinta Beri ah haduu alle Idmo.